Dr Abdiwali M. Guray “Annigu arrinta Soomaaliya waxaan aaminsannahay xelkeedu hadda inuu dhow-yahay” – Radio Daljir
Juunyo 28, 2015 11:25 b 0
Toronto, June, 28 – 2015 – Siyaasiga Cabdiwali Maxamuud Gurey, oo marti ku ahaa Barnaamijka Todobaadka iyo Toronto ee ka baxa Tv-ga Somalichanel ayaa ka hadlay arimo badan oo la xiriira guud ahaan gayiga Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arimo la xiriira dhismaha Maamul Goboleedyada ka jira dalka iyo kan dhismihiisa uu haatan ka socdo Degmada Cadaado. isagoo sheegay in ay muhiim tahay in loo hogaansamo Dastuurka dalka oo dhigayo in Maamul ay dhisan karaan Labo Gobol iyo Wax ka badan.
Md. Cabdiwali Maxamuud oo lagu tilmaamo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa wax-kusoo bartay ayaa sheegay in isaga muhiimadiisa ay tahay oo kaliya sidii ay dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay horumar buuxda u gaari lahaayeen.
”Haddii aan Laaluush Bixin Lahaa Shaki kuma jirin in aan wax un heli lahaa Mid shaydaan Dharbaaxay hadii aan is helno ana shaydaan i dharbaaxay shaki kuma jirin in aan wax heli lahaa””ayuu yiri Dr. Gurey
Sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladaha dhismaha Maamulada Jubbaland oo uu sheegay in guud ahaanba DF ay gabtay doorkeedii, isla markaana Jubbaland go\_’aanka ay qaatay hadda ay ula muuqato in xal uu ku imaan-karo.
DHAGAYSO:Cali Xaaji Warsame oo Gal-Mudug uga Digay Sheegashada Dhul aysan Xukumin